Warshadaha Shiinaha Pouf P053 iyo alaab-qeybiyeyaasha | Qalabka Dcl
Saxarada S026A, S026B
Madaxa PP oo leh Lugaha Qalabka ee Maqaarka Madoow
Saqafka Sofa, Kursiga Fadhiyada, Gacanka Arm
Saxarada lugta alwaax xaabada leh Aamiin ...
Qolka Farshaxanka Casriga ah ee Sofa
Miiska Cuntada oo leh 6 Kursi
Kuraasta Qolka Fadhiisan
Shayga No: P053
Qalabka: 3D daabacan oo daabacan oo leh giraan dahab ah.
Cabirrada: φ530 * 420mm
Xidhmada: 1pcs / ctn
Cabbirka xirmada: 60cm x 60cm x 45cm
Miisaanka saafiga ah: 6.3 kg / pc
Miisaan culus: 7.8 kg / ctn
MOQ: 100 kumbuyuutar kasta
Loading Capacity: 810 pcs / 40HQ
Waqtiga Gaarsiinta: 4-5 toddobaad
Habka dhoofinta: badda dhexdeeda
Dekadda Loading: XINGANG, TIANJIN, CHINA
Shuruudaha Bixinta: L / C aragtida, T / T, EXW
Ikhtiyaarada Naqshad 3D ama in la naqshadeeyo
S: Ka waran awooda wax soo saarkaaga? Iyo wareegga wax soo saarkaaga?
A: Waxaan dhammeyn karnaa 50-60 weelasha bil kasta. Maalmahan, badiyaa waxaan dhoofinaa 30-40 weelal bishii. Marka laga hadlayo wareegga wax soo saarka, waxay noqon doontaa 45-60 maalmood. Sababtoo ah Waqooyiga Shiinaha, waxaa jira xannibaadyo deegaan oo adag oo ku saabsan warshadaha alaabta guryaha. Gaar ahaan bilaha Maarso iyo Sebtember. (Waxaa jiri doona Kongareeska Shiinaha labadan bilood gudahood) Bishii Oktoobar, waxaan heysanaa 7 maalmood oo fasax ah oo loogu talagalay Dabaaldegga Qaranka. Nofeembar, Xilliga kuleylka Waqooyiga Shiinaha. Iyo Bisha Janaayo, waxaan ku haysan doonnaa ku dhawaad ​​15 maalmood xilliyada guga. Intaa waxaa dheer, waxaan aad u qiimeyneynaa tayada, haddii aan helno dhibaato tayo leh, waa inaan dib u soo saarno. Uma oggolaanayno inay badeecado cilladeysan ay macaamiisha u soo diraan.
S: Haddii aad aragtid sheyga cilladaysan, sideed ula tacaali doontaa?
A: Haddii cilladdu yar tahay, waanu hagaajin karnaa. In kasta oo, haddii cilladdu saamayn ku yeelanayso xasilloonida oo ay yeelato dillaac iyo xoq, ku soo celi aqoon-is-weydaarsiga si dib loogu celiyo. Baadhitaanka ka dib QC, waxaan u diri doonaa macaamiisheenna warbixinta kormeerka iyo sawirro. Kaliya macaamiisha ayaa aqoonsan, waxaan dhoofin karnaa alaabta. Waxaan bixin karnaa shahaadada kahortaga jeermiska, foomka A, foomka E, CO illaa iyo inta ay u baahan yihiin macaamiisha.
S: Amarkayga maxkamadaynta, haddii aan doonayo inaan iibsado tiro yar, waa maxay MOQ-kaaga?
A: Run ahaantii waan fahamsanahay inaad rabto inaad iibsato tiro yar si aad u tijaabiso xaalada iibka ee suuqaaga. Annaguna waxaan diyaar u nahay inaan ku taageerno. Marka sida caadiga ah MOQ-ga kursigeennu waa ugu yaraan 50 kumbuyuutar nooc kasta iyo midab kasta, waxaan jeclaan lahayn inaan ka yareynno 30 nooc nooc kasta iyo midab kasta.
Hore: Pouf P050A, P050B
Xiga: Kursiga gacanta
Pu daboolaya Pouf